New Boeing 737MAX mawaadin firfircoon
New Boeing 737MAX mawaadin firfircoon 4 bilood 1 toddobaad ka hor #1674
Waxaan dhawaan ku daray 737MAX - Waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan laakiin dhibaatooyin ayaa jira.
Qaddarka raadiyaha ee COM 1 iyo COM2 waa kuwo aan shaqeynaynin. Henc wuu awoodi waayey inuu la xiriiro ATC.
Ma jiro cod maqal ah oo loo yaqaan 'ILS Morse code'.
Qof kasta oo kale ayaa helay tan>
New Boeing 737MAX mawaadin firfircoon Bilood 4 2 maalmood ka hor #1699
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 2
Maqalka 'ILS' wuxuu shaqeeyaa kaliya haddii aad ka shaqeyso 3 D cockpit
New Boeing 737MAX mawaadin firfircoon Bilood 3 3 todobaad ka hor #1705
Arimahan waxaa horeyba loogu hagaajiyey nooca ugu dambeeya (v1.03) fadlan soo dejiso oo dib u rakibo mar labaad.
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray rikoooo.
New Boeing 737MAX mawaadin firfircoon Bilood 3 3 todobaad ka hor #1707
ILS ma shaqeyn jirin, nalalka diyaaradda ayaa hooseeya….
New Boeing 737MAX mawaadin firfircoon Bilood 3 3 todobaad ka hor #1708
Hadaad emayl leedahay waxaan kuu soo diri karaa nuqul ka mid ah noocgayga la baddelay ee MAX? Waxaan helay rukhsad si aan wax u tafatiro waxayna umuuqataa inay sifiican ii shaqeyso, i ogeysii nambarka duulimaadka aad adeegsato.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.207